ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလွန်းတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတွေ တာဝန်ကျလို့ ဒုက္ခကြုံရတဲ့ အပျိုရွယ် ဆရာမလေးတွေရဲ့ အဖြစ်ဆိုး - CeleLove
ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလွန်းတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတွေ တာဝန်ကျလို့ ဒုက္ခကြုံရတဲ့ အပျိုရွယ် ဆရာမလေးတွေရဲ့ အဖြစ်ဆိုး
October 21, 2019 Cele Love ပြည်တွင်းသတင်း 0
ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ် …။
ဂဃနဏ မေးကြည့်တော့ တောင်တန်းဒေသတစ်ခုမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေး ။ ဒါနဲ့.. ဆရာဝန်ကြီးက..သမီးချစ်သူ က ချစ်သူတို့ ဘာသာဘာဝလွန်ကျူးပြီးမှ တာဝန်မယူလို့လား မေးတော့…ဆရာမလေး မှာ ငိုတော့သတဲ့ …။
ဘာချစ်သူမှလည်း မရှိဘူး ၊ အခု ရတဲ့ကိုယ်ဝန်ကလည်း.. ခလေးဖအေ ဘယ်သူမှန်းတောင် မသိဘူး ။ မိုးတွေ အရမ်းရွာတဲ့ညကသူ တာဝန်ကျတဲ့ ရွာကပေးတဲ့ အိမ်လေးမှာအိပ်ပျော်နေတုန်း အိမ်ပေါ်တက် အစော်ကားခံလိုက်ရတာတဲ့ ။ ရပ်ရွာကို တိုင်ရအောင်…မှောင်ထဲမဲထဲ ကိုယ့်စော်ကားတဲ့သူ ဘယ်သူမှန်းမသိရတဲ့အပြင် ၊ ကြောက်စိတ်ရယ်…ရှက်စိတ်ရယ်က ကြီးစိုးနေတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဲရှာဘူး …။
အဲ့ဒီမှာ.. ဆရာဝန်ကြီး က ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေသမီးလေးရယ် လို့ပဲ…သူလည်း ညည်းတွားနိုင်ရှာတယ်လို့ ရေးထားတယ် ။ ကျနော့်သမီးလေးသာဆိုရင် ကျနော် ဘယ်လောက်တောင် ရင်ကျိုးရမလဲ…တဲ့
၂၀၀၉ လောက်က ခြေလျင်မှာနေတဲ့ အချိန်စစ်ဆင်ရေးထွက်တော့ ရှေ့တန်းပြန်ဝင်ခါနီးရွာတစ်ရွာမှာ ညအိပ်ရတယ် ။ ကိုယ်တည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင်နဲ့ စကားစမြည်ထိုင်ပြောနေရင်း၊စာသင်ကျောင်း ရှိတာပဲ၊ ရွာက ခလေးတွေပညာရေးအတွက် ခများတို့ မပူရဘူးပေါ့ လို့ …၊
ဒါပေမယ့်..ဒီလောက် လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်ဝေး၊ သေနတ်သံတဖုံးဖုံးနဲ့ ဒေသမှာ အဲ့ဒီ ဆရာ ဆရာမတွေ ရေရှည်ရော မြဲပါ့မလား ဆိုတော့…အဲ့ရွာသား ပြန်ပြောတာကြားပြီး ကိုယ်တွေ ပါးစပ်ပါ အဟောင်းသား ဖြစ်သွားရတယ် …။
ဘယ်မြဲမလဲ ဗိုလ်ကြီးရာ.. ဒါပေမယ့် မြဲအောင်လုပ်ရတာပေါ့ ။ ဆရာမလေးက အညာဖက် ဇာတိက၊ရွာက အရင်လူတွေလို ပြန်မသွားအောင်ဆိုပြီး…ခလေးဖအေ တစ်ခုလပ် ကို ဆရာမလေး အိမ်ပေါ်တက်လုံးခိုင်းပြီး.. ပေးစားပြစ်တာ ။ ပြီးရင်.. ဖြစ်လည်း ဖြစ်ပြီးသွားပြီ.. ဇွတ်ပြန်မယ်ဆိုရင် တောထဲကကောင်တွေ ဆီ လက်တို့မယ် ။ ကိုယ် စကားစမြည်မေးတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဆရာမလေး…အဲ့ရွာကခလေးဖအေ တစ်ခုလပ်နဲ့ ရတဲ့ ခလေးတစ်ယောက်တောင် ရနေပြီ …။
ဘယ်ဒေသပါ လို့ မရေးချင်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့်.. သိပ်ရိုးသားပါတယ် ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တကယ်လက်တွေ့ အများတကာမသိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မြေပြင်အမှန်တရားတွေ….
ရွာမှာ ဆရာမ မြဲချင်ရင်..အဲ့ရွာမှာ တာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေ ကို ရွာက လူနဲ့ ရည်းစားထား၊အိမ်ထောင်ပြု..အဲ့ရွာမှာ အခြေချပေါ့ ဆိုပြီး..စကားကို လက်လွတ်စပယ်ပြောတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ် …။
အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေထဲ က ဆရာမတစ်ယောက်ယောက်သာ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ သွေးသားရင်းခြာ သမီးရင်း ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို စကားမျိုးပြောမလဲ ဆိုတာပဲ …။ ။
Credit to Linn Thu Paing
ဆကျသှယျရေးခကျခဲလှနျးတဲ့ တောငျပျေါဒသေတှေ တာဝနျကလြို့ ဒုက်ခကွုံရတဲ့ အပြိုရှယျ ဆရာမလေးတှရေဲ့ အဖွဈဆိုး
ဆရာဝနျကွီးတဈယောကျ ရေးထားတဲ့ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ဖတျဖူးတယျ …။
ဂဃနဏ မေးကွညျ့တော့ တောငျတနျးဒသေတဈခုမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ကြောငျးဆရာမလေး ။ ဒါနဲ့.. ဆရာဝနျကွီးက..သမီးခဈြသူ က ခဈြသူတို့ ဘာသာဘာဝလှနျကြူးပွီးမှ တာဝနျမယူလို့လား မေးတော့…ဆရာမလေး မှာ ငိုတော့သတဲ့ …။
ဘာခဈြသူမှလညျး မရှိဘူး ၊ အခု ရတဲ့ကိုယျဝနျကလညျး.. ခလေးဖအေ ဘယျသူမှနျးတောငျ မသိဘူး ။ မိုးတှေ အရမျးရှာတဲ့ညကသူ တာဝနျကတြဲ့ ရှာကပေးတဲ့ အိမျလေးမှာအိပျပြျောနတေုနျး အိမျပျေါတကျ အစျောကားခံလိုကျရတာတဲ့ ။ ရပျရှာကို တိုငျရအောငျ…မှောငျထဲမဲထဲ ကိုယျ့စျောကားတဲ့သူ ဘယျသူမှနျးမသိရတဲ့အပွငျ ၊ ကွောကျစိတျရယျ…ရှကျစိတျရယျက ကွီးစိုးနတေော့ ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောရဲရှာဘူး …။
အဲ့ဒီမှာ.. ဆရာဝနျကွီး က ဖွဈမှ ဖွဈရလသေမီးလေးရယျ လို့ပဲ…သူလညျး ညညျးတှားနိုငျရှာတယျလို့ ရေးထားတယျ ။ ကနြေျာ့သမီးလေးသာဆိုရငျ ကနြျော ဘယျလောကျတောငျ ရငျကြိုးရမလဲ…တဲ့
၂၀၀၉ လောကျက ခွလေငျြမှာနတေဲ့ အခြိနျစဈဆငျရေးထှကျတော့ ရှတေ့နျးပွနျဝငျခါနီးရှာတဈရှာမှာ ညအိပျရတယျ ။ ကိုယျတညျးတဲ့အိမျက အိမျရှငျနဲ့ စကားစမွညျထိုငျပွောနရေငျး၊စာသငျကြောငျး ရှိတာပဲ၊ ရှာက ခလေးတှပေညာရေးအတှကျ ခမြားတို့ မပူရဘူးပေါ့ လို့ …၊
ဒါပမေယျ့..ဒီလောကျ လမျးပနျးအဆကျအသှယျဝေး၊ သနေတျသံတဖုံးဖုံးနဲ့ ဒသေမှာ အဲ့ဒီ ဆရာ ဆရာမတှေ ရရှေညျရော မွဲပါ့မလား ဆိုတော့…အဲ့ရှာသား ပွနျပွောတာကွားပွီး ကိုယျတှေ ပါးစပျပါ အဟောငျးသား ဖွဈသှားရတယျ …။
ဘယျမွဲမလဲ ဗိုလျကွီးရာ.. ဒါပမေယျ့ မွဲအောငျလုပျရတာပေါ့ ။ ဆရာမလေးက အညာဖကျ ဇာတိက၊ရှာက အရငျလူတှလေို ပွနျမသှားအောငျဆိုပွီး…ခလေးဖအေ တဈခုလပျ ကို ဆရာမလေး အိမျပျေါတကျလုံးခိုငျးပွီး.. ပေးစားပွဈတာ ။ ပွီးရငျ.. ဖွဈလညျး ဖွဈပွီးသှားပွီ.. ဇှတျပွနျမယျဆိုရငျ တောထဲကကောငျတှေ ဆီ လကျတို့မယျ ။ ကိုယျ စကားစမွညျမေးတဲ့အခြိနျမှာ အဲ့ဆရာမလေး…အဲ့ရှာကခလေးဖအေ တဈခုလပျနဲ့ ရတဲ့ ခလေးတဈယောကျတောငျ ရနပွေီ …။
ဘယျဒသေပါ လို့ မရေးခငျြဘူး ၊ ဒါပမေယျ့.. သိပျရိုးသားပါတယျ ဆိုတဲ့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော တကယျလကျတှေ့ အမြားတကာမသိ ဖွဈခဲ့ရတဲ့မွပွေငျအမှနျတရားတှေ….
ရှာမှာ ဆရာမ မွဲခငျြရငျ..အဲ့ရှာမှာ တာဝနျကတြဲ့ကြောငျးဆရာမတှေ ကို ရှာက လူနဲ့ ရညျးစားထား၊အိမျထောငျပွု..အဲ့ရှာမှာ အခွခေပြေါ့ ဆိုပွီး..စကားကို လကျလှတျစပယျပွောတဲ့ ဝနျကွီးခြုပျကိုမေးခှနျးထုတျခငျြတာ တဈခုပဲ ရှိတယျ …။
အပျေါမှာရေးထားတဲ့ ဖွဈစဉျတှထေဲ က ဆရာမတဈယောကျယောကျသာ ဝနျကွီးခြုပျရဲ့ သှေးသားရငျးခွာ သမီးရငျး ဖွဈနရေငျ ဘယျလို စကားမြိုးပွောမလဲ ဆိုတာပဲ …။ ။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး သေဆုံး (ရုပ်သံ)
“အဝတ်မပါတဲ့ပုံတွေတင်ပြီး Attention မရှာဖို့ပြောသူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်”